Homeराशिफलआज भदौ १६ गते मङ्गलबारको राशिफल हेरेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्
September 1, 2020 admin राशिफल 5535
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) बिद्यामा राम्रो प्रगति हुने हुँदा पढाइ लेखाइमा मन जानेछ । दाजुभाई वा अग्रजह’रुको सुझाब तथा सल्लाह मानेर अगा’डि बढ्दा सफलता पाउन सकिनेछ । नयाँ कामहरु गरेर आम्दानिका स्रोत’हरु बढाउँन सकिनेछ भने बिभिन्न अवसरहरुले पछ्या’उने हुँदा राम्रा परिणाममुखि काम’ गर्न सकिनेछ । खनिज पदार्थको प्रयोग मार्फत यथेश्ट धन आर्जन हुने ग्रह योग रहेकोछ । नयाँ सवारि साधन तथा मन परेको भौतिक सम्पति लाभ हुने गतिलो सम्भावना रहेकोछ ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) स्वास्थ्य कमजोर रहने र पारिवारिक स्वास्थ्यमा धन खर्च हुनेछ । जग्गा तथा सवा’रि साधन सम्बन्धि झमेलामा फस्ने ग्रहयोग रहे’कोले ख्याल गरेर काम गर्नुहोला । राजनिति तथा समाजसेवामा जनतको काम गर्दा गर्दै आलोचनाको शिकार होईनेछ । माया प्रेममा एक अर्कालाई बिश्वा’स गर्न नसक्दा नचा’हादा नचाहादै छुट्टिनु पर्ने बाध्यता आउनेछ । पढाई लेखाईमा भने बिद्यार्थि बर्गहरुले अलि बढि ध्यान दिए सफलता हात पार्न सकिनेछ ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) स’मयको ख्याल नगर्दा वा साना तिना काममा अल्झेर बस्दा महत्वपुर्ण काम’हरु थाति रहनेछन् । बाटो हिड्दा वा सवारी साधन प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला गन्तब्यमा पुग्नु अगावै बिभिन्न समस्या’हरुको सामना गर्नु पर्नेछ । लामो समय देखिको माया प्रेममा ब्रेक लाग्नेछ । स्वास्थ्यमा सम’स्या आई दैनिकी प्रभावित हुनेछ ध्यान दिनुहोला । पढाई लेखाईमा समय दिए पनि भनेजस्तो उपलब्धि हासिल नहुन सक्छ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) तार्कि’क क्षमताबा बृद्धि भएर जानेछ भने बाणी:मा थप निखारता आउने हुनाले नाम तथा दाम दुवै कमाउन सकिनेछ । एकल तथा साझेदारि व्यापार फ’स्टाएर जानेछ भने व्यपारकै शिलशि’लामा रमाईलो यात्राको तय हुनेछ । माया प्रेममा नजिक हुने समय रहे’कोछ भने बिपरित लिङग प्र’तिको आकर्षण बढेर जानेछ । पढाईमा अरुभन्दा एक कदम बढि सफलता हात पार्न सकिनेछ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) कुनै पनि काम’लाई पुनह गर्नु पर्दा मानसिक तना’ब बढ्नेछ । पुराना रोग’हरु फेरि बल्झन सक्छ ध्यान दिनुहोला । रकम लागनि गर्नको लागि केहि समय पर्खनु नै उचित रहेकोछ । व्यापार व्या’वसायमा भनेजस्तो आम्दानि नहुदा आर्थिक अवस्था खस्क’नेछ । प्रेममा एक अर्कालाई बुझ्न नसक्दा केहि समयको लागि टाडिनु पर्ने हुन सक्छ । कुनै पनि बिवा’दमा सामेल भए हारिने सम्भावन रहेकोछ ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) खोज तथा अनुशन्धा’नको क्षेत्रमा भनेजस्तो नतिजा आउने हु’नाले पढ्न लेख्न जोस जागर बढ्नेछ । बिलाशीता’ले खर्च बढाएपनि भौति’क सम्पति तथा उपाहार प्राप्तीको गतिलो योग रहेकोछ । आर्थिक समस्या सुल्झाउदै शिक्षा तथा बैकिङ क्षेत्रमा लगानि बढाउन सकिनेछ । बंश बृद्धिको गतिलो योग रहेकोछ भने नोकरिमा बढुला हुने योग रहेकोछ । बौद्धिकता’ले सम्मान दिलाउनेछ ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) अध्य’यन तथा अध्यापनमा सफ’लता प्राप्त गर्न अलि बढिनै मेहनेत गर्नु पर्नेछ । आमा तथा आफन्तबाट भनेज’स्तो सल्लाह तथा सुझाब पाईने हुनाले सुधारात्मक काम गर्न सहयोग हुनेछ । कृषि तथा पशुपालन व्याव’सायबाट राम्रो आम्दा’नि हुनेछ । समाजिक काममा समय दिनु पर्नेछ भने तपाईको काम देखि सबै खुसि हुनेछन् । राजनीति तथा समाजसे’वामा समय लगानि गर्नेहरुले सर्ब’साधारण सँग सन्तुतिल व्यबहार गर्नुहोला काम बिग्रने हुँदा मान सम्मानमा कमि हुनेछ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) व्या’पारमा प्रशस्त समय खर्चिए पनि आम्दानी थोरै हुँदा दैनिक कामहरु प्रभावित हुन सक्छन् । छिमेकी तथा दाजु’भाई सँग सामान्य कुरामा बिवाद बढ्नेछ भने बाहिरका मानिस सँग न्यायिक निर्णयहरुमा सामे’ल भए हारिने सम्भा’वना रहेकोछ । सामाजिक तथा परोप’कारी क्षेत्रमा सामेल भए पनि आलोचना गर्नेहरुबो बिगबिगी रहनेछ । प्रेममा धोका हुने हुदा आजको दिन टाडै बस्नुनै बेस हुनेछ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) सबैको सहयोग पाईने हु’दा प्रतिष्ठित काम गर्ने अ:वसर जुर्नेछ । बोलेर गर्ने कुनैपनि पेशा व्याव’साय फस्टाएर जानेछ । समय अनुशार बिचार सिर्जना गर्न सकिने हुँदा धे’रैको मन जित्न सकिनेछ । कुटुम्ब तथा आफन्तसँग मिलेर गर्ने कुनै पनि व्याव’साय फस्टाए’र जानेछ भने आर्थिक अवस्थामा सुधार भएर जानेछ । प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागि समय राम्रो रहेकोछ । गित संगित तथा मोडलिङ पेशा व्यावसाय’बाट भनेजस्तो आम्दानि हुनेछ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) अध्ययन तथा प्रतिष्प’र्धामा तपाईको नाम एकक कदम अगाडि आ’उनेछ भने प्रतिष्पर्धिहरुलाई किनारा लगाउदै नतिजा आफै’तिर ल्याउन सकिनेछ । राजनिति तथा समाजसे’विहरुले जनताको समर्थनमा पद प्रा’प्त हुने योग रहेकोछ । समय अनुकुल चल्न सकिने हुनाले र व्यापारमा भनेजस्तो आम्दानि हुने हुनादे आर्थिक अवस्था’ सुदृढ रहनेछ । प्रेममा बिश्वास’को बाताबरण सिर्जना हुनेछ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) आफन्त तथा अग्रज’हरुसँग विवाद सिर्जन हुनेछ । गैर न्य’यिक काम नगर्नुहोला दण्ड तथा जरिवा’ना हुने समय रहेकोछ । स्वास्थ्य’मा समस्या आउने तथा औषधि उपचार खर्च बढेर जानेछ । माया प्रेममा धोका हुनेछ भने पढा’ई लेखाईमा मन नजादा अरुभन्दा पछि परि’नेछ । बिदेशि सामानको व्या’पार व्यावसाय फस्टा’एर जानेछ भने कर्म प्राप्तीको लागि लामो दुरिको बिदेश यात्रा हुनेछ ।
April 28, 2021 admin राशिफल 2134
April 1, 2021 admin राशिफल 2558
September 23, 2020 admin राशिफल 5279
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (220406)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (212065)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (211764)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (210512)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (209299)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (208422)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (206900)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (206690)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (175599)